एउटै भेडाको मूल्य ४५ हजार ! | Nepal Ghatana
एउटै भेडाको मूल्य ४५ हजार !
प्रकाशित : २७ आश्विन २०७८, बुधबार १८:१९
जुम्लामा यसवर्षको दसैँमा भेडाको मूल्य आकाशियको छ । यहाँ एउटै भेडा ४५ हजार रुपैयाँ सम्ममा बिक्री भएको छ ।
जुम्लाका भेडा व्यवपारी प्रेम कार्कीका अनुसार यसवर्ष जुम्लामा ल्याइएका भेडा बाजुराका हुन् । जुम्लामा भेडा नपाएपछि बाजुरा पुगेर ल्याएको उनले बताए । जुम्लामा मासुको माग बढ्दै जानु, तर उत्पादन नहुनुले भेडाको मूल्य आकाशिएको हो । अहिले जुम्लामा एक किलो मासुको एक हजार रुपैयाँ पर्न थालेको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि जुम्लालाई मासु र दुधमा आत्मानिर्भर बनाउन विभिन्न अनुदानका कार्यक्रम दिँदै आएको छ । तर, सरकारी रकम सक्नका लागि अरुकै भेडा देखाएर अनुदान खाने प्रवृत्तिका कारण पशुवस्तु क्षेत्रको उत्पादन भने अनुसार वृद्धि नभएको नागरिक समाजका अगुवा राजबहादुर महत बताउँछन् । उनले भने, ‘अनुदान दिइन्छ त्यसपछि अनुगमन हुँदैन । सरकारले दिने अनुदानका कार्यक्रममा कडा निगरानी हुन आवश्यक छ ।’